Ukubulala Archives - Isambane News
Ugencwe ngocelemba washona owesifazane was eCofimvaba
Owesifazane uNksz Sisanda Magodla waseCofimvaba esigodini saseMahlubini ugwazwe wabulawa ngocelemba emgwaqeni. Ngokombiko lo wesifazane nabangani bakhe bebevakashele emzini othile,Bafike endlini…
Intombi ibulale isoka layo,yashisa isidumbu sayosilahla eMadadeni
Usashaqekile umndeni wakwaLanga eNewcastle ngemuva kokuthi intombi ishise yabulala indodana yawo ngoba ingafuni ukwaliwa. Ngokuthola kweSolezwe ngoMgqibelo,uNksz Nobuhle Nzuza (24)…
Izindaba Izindaba ezihamba phambili
Owesifazane utholwe enenxeba lokudutshulwa emotweni emile
Amaphoyisa ase-Eastern Cape acela usizo lokuthungatha ukuthi ngubani onecala ekubulaweni kowesifazane isidumbu sakhe esitholwe emotweni emile eceleni komgwaqo ku-R102 ngaseJeffreys…
Isidumbu sikaNeo Mahlangu oneminyaka engu-16,owanyamalala,sitholwe sibulewe ngu-anti nendodana yakhe.
UMahlangu owanyamalala ekuqaleni kwenyanga edlule, isidumbu silandelwe. Silandelwe ku-Masia Road eTsakane,satholwa ngokuseshwa nokuhlenga kuka-naidoo neqembu. Umsolwa u-andile Aalivirah Mthembu uboshelwe…
Kuboshwe owesifazane owashaya wabulala umshana wakhe oneminyaka engu-16
Kusolwa ukuthi lona wesifazane nendodana yakhe eneminyaka engu-14 ubudala bashaye babulala umshana oneminyaka engu-16 owayebavakashele eTsakane esuka eDaveyton eGoli. Owesifazane…
Iphunga elibi laholela ekutholakaleni kwesidumbu sengane yaseKZN ebilahlekile
Ngemuva kwezinsuku eziyisishiyagalombili ingane encane yaseMpangeni yalahleka idlala ngaphandle komuzi wakubo,itholwe isishonile ngemuva kwendlu yangasese. Ngokusho kwamaphoyisa ase-kZn, uNkosenhke lwandile…
Uzogwetshwa ngenyanga ezayo owesifazane waseKZN owabulala umakhelwane,ngenhloso yokudayisa izitho zakhe
Owesifazane waseThekwini olahlwe yicala lokubulala nokuthumba intombazane, umndeni wayo abekade engabangani nawo uzosazi isiphetho sayo maduze. Okhulumela i-NPA eKZN uNatasha…